Haala sochii Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisuun gaafatamaan sabqunnamtii ABO Jaal Battee – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioHaala sochii Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisuun gaafatamaan sabqunnamtii ABO Jaal Battee
Urgeessaa miidiyaalee adda addaa waliin turtii taasisu. Turtii taasisan keessatti miidiyaaleen haala adda addaan sagalee kutanii hambisu. Kun BBC waliin turtii taasisanii guutuusaa waan hin dabarsineef, ijoon dubbii hasa’amuu qabu waan hafeeruuf isin biraan geenya.
#Haala Hidhamtootni Siyaasaa Galaanitti Hidhaman Keessa Jiran!
Guyyaa har’aa Bitootessa 11, 2021 Jaallan mana hidhaa Galaan jiran dubbisuu dhaqee, Jaal Mikaa’el Booran, Jaal Kennaasaa Ayyaanaa fi Gaazexeesituu Masrat Dhaabaa bakka tokkotti argadheen dubbiseen ture.
Jaallan Kutannoo fi Murannoon isaanii akkaan ol’aanaa dha. Ejjannoon jaarmiyaaleen Siyaasaa ABO fi KFOn fudhatan Ejjannoo sirrii akka ta’e dubbatanii caalmatti hojii qabsoo irratti akka ummanni keenya jajjabaatu dhaammatan.
Haalli fayyaa isaanii xiqqoo rakkisaa ta’us hamileedhaan akka of jajjabeessaa jiraataa jiran irraa hubadhe. Yeroo dhukkubsannitti carraa mana yaalaa argachuu hin qabnu jedhu.
Jaal Mikaa’elii fi Jaal Kennaasaan teenyee tumaan waan dhufu eeguu malee dhimmi keenya ejjannoo Siyaasaa keenyaa qofa akka ta’etti amannee taa’aarra, qaamni nutti dhihaatee waa nuun jedhaa jiru hin jiruu jedhu.
Gaazexeesituun Masrat Dhaabaa ammoo Kibxata dhufu kana beellama mana Murtii akka qabdu natti himte.Walumaa galatti jaallan roorroo MurnaPP tiin irratti gaggeeffamaa jiruun mirga Dimokiraasii isaanii dhabuun murtoon haqaa dhoowwatamus, Hamilee fi Cichoominnaan hidhamuun isaanii qabsoo ta’utti amananii hidhamaaru; Ummanni keenya kesssaa fi alaan jiru akeekaa fi Kaayyoo jaallan irratti wareegama qaamaa qalbii baasan kana galiin gahuuf qooda isaan irraa eeggamu cufa bahachuu qaba jedhaniiru.
Ummaatni Tigraay fi TPLFn waliin ta’uun Carraa ijji Addunyaa fi Miidiyaaleen Addunyaa Itoophiyaa irratti deebi’anii jiranitti fayydamaa jiru..!!
Waan har’a Tigraay keessatti ta’e qofa ilaaluun ga’aadha. Ummaatni Tigraay Magaaloota Tigraay keessatti balbala manaa cufatanii Mormii isaanii gaggeessuun lagannaa godhuun Mormii isaanii warra qorannoof USA fi European union ergiteetti argisiisa oolan..Waraanni TPLF immoo Maqalee dabalatee magaaloota Tigraay gara garaa keessatti Tarkaanfii fudhachaa oole..!!
Sabni tokkummaan qabu akkasitti Gabroomfataa biyya isaanii bituuf dhufe dura dhaabbachuun falmaa hadhooftuu gaggeessa jiru..!! Nutoo akka Oromootti yeroo Miidiyaaleen Addunyaa fi Ijji Addunyaa Itoophiyaa irra jirtu kanatti yoo tokkummaan kaanee hin falmanne, yoom Bilisummaa Oromoof Walabummaa Oromiyaattif qabsoofna…?
Yoo callifne boru seenaan nu gaafata…!!
Oromoo yeroo carra qabeessa kanatti fayydamii Mirga Abbaa biyyummaa Oromiyaaf FALMADHU..!!
Waliif Dabarsaa imaanadha…!!